IPhone Wicitaanada Degdega ah: Sida loo Isticmaalo Apple SOS
Qalabka degdegga ah ee SOS-ka iPhone wuxuu fududeeyaa helitaanka kaalmo isla markiiba. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad wicitaanada u dirto adeegyada gurmadka, iyo in laguu sheego xiriirkaaga xaaladda deg-degga ee loo xilsaaray labadaba xaaladdaada iyo goobtaada adigoo isticmaalaya GPS-ga iPhone .
Maxay Tahay iPhone SOS degdeg ah?
Xaaladaha deg-dega ah ee SOS ayaa la dhisay imtixaan-kicin 11 iyo ka sare Tilmaamyadan waxaa ka mid ah
Dhigista wicitaanada adeegyada gurmadka degaanka ee ku salaysan inaad guurto boodbood ama cadaadis.
Diyaarinta qalabka digniinta ah si aad u ogaato in wicitaanka la sameyn doono.
Ogeysiinta xiriirinta xaaladaha deg dega ah ee goobtaada (ama ugu yaraan goobtaada telefoonka).
Cusbooneysiinta xiriirrada xaaladaha degdegga ah haddii telefoonkaaga uu u guuro meel cusub.
Siinta sifooyinka isku midka ah ee Apple Watch.
Sababtoo Sababta SOS degdeg ah u baahan tahay iOS 11 si ay u shaqeyso, waxaa kaliya oo laga heli karaa telefoonnada gacanta laga qaadi karo. Taasi waa iPhone 5S , iPhone SE , iyo kor. Waxaad ka heli kartaa dhamaan sifooyinka xaaladaha degdega ah ee SOS ee app Settings ( Settings -> SOS Emergency ).
Sida loo sameeyo wicitaan degdeg ah SOS
Codsashada gargaarka deg dega ah ee SOS waa mid fudud, laakiin sida aad u sameyso waxay ku xiran tahay nooca iPhone ee aad leedahay.
iPhone 8, iPhone X , iyo Newer
Waxaad leedahay laba ikhtiyaar oo ku saabsan moodyadan: midkale guji badhanka dhinaca shan jeer oo isku xiga si taxadar leh, ama qabso badhanka Sidee iyo hal Volume Volume isla waqtigaas ilaa laga gaaro Sariirta Xaalada deg dega ah ee SOS.
Riixidda badhanka shan jeer waxay si degdeg ah u wici kartaa wicitaanka adeegyada degdega ah isla markiiba.
Haddii aad u guurto xajiyaha degdegga ah ee SOS, wicitaanku wuxuu bilaabmayaa isla markiiba.
Haddii aad sii haysato badhanka Sidee iyo Feejignaanta, dib u soo celinta wicitaanku wuxuu bilaabmayaa iyo dhawaaqyada digniinta ah. Hayso keydarrada illaa dhammaadka tirinta iyo wacitaanka adeegyada gurmadka degdegga ah.
iPhone 7 iyo horaantii
Moodooyinkaas, habka kaliya ee lagu dhaliilo Xaaladaha degdega ah ee SOS waa inaad gujisaa dhinaca (aka on / off / sleep / to the button) shan jeer oo dhakhso ah. I do not know
Xaaladda degdegga ah ee SOS ayaa markaa ka muuqda shaashadda.
Masawirka xoqdo si aad u wacdid adeegyada gurmadka.
Kadib markaad wacdid adeegga gargaarka degdega ah, xidhiidhiyahaaga xaaladaha deg-degga (alaabta) ayaa helaya fariin qoraal ah . Farriinta qoraalka ah waxay u ogolaaneysaa inay ogaadaan meesha aad hadda joogtid (sida ay go'aamisay GPS-gaaga, xitaa haddii Adeegyada Goobta laga dhigo , waxay si ku meel gaar ah u awoodaan inay bixiyaan macluumaadkan).
Haddii goobtaada isbeddesho, qoraal kale ayaa loo diraa xiriiriyahaaga macluumaad cusub. Waad diidi kartaa ogeysiisyadaas adigoo ku dhajinaya barta xaaladda ee korka shaashadda ka dibna ku dhaji Joojinta Wadaagga Goobta Degdega ah .
Sida Loo-joojiyo Wacitaanka Degdegga ah ee SOS
Soo afjarida gargaarka deg-deg ah ee SOS-sababtoo ah xaaladda degdegga ah way ka dhammaatay ama sababtoo ah wicitaanku wuxuu ahaa shil - waa mid sahlan:
Taabo badhanka Joojinta .
Maqaayadda ka soo baxaysa dhinaca hoose ee shaashadda, ku dheji Wicitaan (ama Joojin haddii aad rabto inaad sii wado wicitaanka).
Haddii aad sameysey xiriir deg-deg ah, waa inaad sidoo kale go'aamisaa haddii aad rabto inaad joojiso ogeysiinta.
Sida Looga Dhaafo iPadka SOS Gaadhiga degdega ah
Badbaadinta, kicinta telefoonka degdega ah ee SOS adigoo isticmaalaya badhanka gacanta ama adoo sii wadaya isku-xiraha labada-wada-degga ah isla markiiba waxay wacaan wicitaanada adeega gurmadka deg dega ah oo ogeysiiya xiriiriyahaaga deg-degga ah. Laakiin haddii aad u maleyneyso inay jirto suurtogalnimad aad u sareysa oo aad shil gaari doonto SOS-ka, waxaad awood u yeelan kartaa in aad joojiso habkaas oo aad joojiso khaladaadka 911. Halkan waa sida:
Taabo Goobaha . I do not know
Taabo Emergency SOS .
Hoos uji gawaarida tooska ah ee garaaca / cadaanka.
Sida Looga Dhaafo Sarkaalka Xilliga Degdega ah ee SOS
Mid ka mid ah waxyaabaha muhiimka ah ee xaalad degdeg ah badanaa waa qeylo dheer si aad u soo jiidato fiiradaada. Taasi waa kiiska iPhone ee Emergency SOS. Marka telefoonka gurmadka degdega ahi uu soo kiciyo, siren aad u sarreeya ayaa lagu ciyaara inta lagu guda jiro dib ugu soo noqoshada si aad u ogaan karto wicitaanku inuu dhow yahay. Haddii aad jeclaan lahayd inaadan maqlin dhawaaqa, raac talaabooyinkan:
Taabo Goobaha .
Hoos uji jumlada Mawjada Saacadaha Muuqaalka si cad / cad.
Sida Loo Helo Xiriirrada Degdegta ah
Awoodda degdegga ah ee SOS si ay si toos ah ugu wargaliso dadka ugu muhiimsan noloshaada xaalad degdeg ah waa mid aad u qiimo badan. Laakiin waxaad u baahan tahay inaad ku darto xiriirada qaar ka mid ah barnaamijka caafimaadka ee horay loo soo dhejiyey si ay u shaqeeyaan. Waa kuwan waxa aad u baahan tahay inaad sameyso:
Taabasho Xiriirada Degdegta ah ee Caafimaadka .
Samee Aqoonsi Caafimaad haddii aadan hore u sameynin.
Fadlan ku dar xiriirka xaaladda degdegga ah .
Xulo xiriirka ka soo gala cinwaankaaga adigoo eegaya ama raadinaya (waxaad isticmaali kartaa oo keliya dadka horeyba joogey, sidaa daraadeed waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad ku darto xiriirada buugga cinwaankaaga ka hor intaadan qaban tallaabadan).
Xulo xiriirka xiriirka adiga kugu saabsan ee liiska.
Kudhow Done si aad u badbaadiso.
Sidee loo isticmaali karaa SOS Degdega ah ee Apple Watch
Xitaa haddii aanad gaareynin iPadkaada, waxaad samayn kartaa wicitaan degdeg ah oo SOS ah oo ku saabsan Apple Watch . On the model oo asal ah iyo taxane 2 Apple Watch, iPhone aad u baahan tahay in ay u dhowaadaan For Watch si ay ula xiriiraan, ama Watch wuxuu u baahan yahay in lagu xiro Wi-Fi iyo leeyihiin Wi-Fi Calling awooday . Haddii aad haysatid taxane ah 3-da Apple Watch oo leh qorshe xog-wareysi ah oo firfircoon, waxaad si toos ah uga wici kartaa Watch-ka. Waa kuwan waxa aad u baahan tahay inaad sameyso:
Hoos uji barta dhinaca ( ma aha dial / Digital Crown) saacadda ilaa xajmiga deg dega ah ee SOS .
Ku riix badhanka SOS ee deg-deg ah dhinaca midig ama sii haynta badhanka dhinaca.
Dib u bilaabashada iyo dhawaaqa digniinta. Waad joojin kartaa wicitaanka adigoo soo xiraya badhanka wicitaanka ugu dambeyn (ama, qaar ka mid ah tusaalooyinka, si adag u cadaadiya shaashadda dabadeedna ku soo xaadirista dhammaadka Wicitaanka ) ama sii wado wicitaanka.
Marka wicitaankaaga adeegga gurmadka uu dhammaado, xiriiriyahaaga deg-degga ah (s) wuxuu kuu soo dirayaa fariin qoraal ah oo ku saabsan goobtaada.
Sida iPhone, waxaad sidoo kale leedahay ikhtiyaari ah oo kaliya riixaya badhanka Side oo aan taaban shaashadda. Tani waxay ka dhigeysaa wicitaanada degdega ah ee SOS inay xitaa u fududaan karaan. Si aad u suurtogasho doorashadan:
On your iPhone, bilaabi app app app.
Taabo Guud .
Hareeraha Holdarka si toos ah u garaaca si toos ah / cagaaran.
Sida Loo Dhigayo Apple Pay
Sida loo casriyeeyo iPadka markaad haysan karin qolka ku filan
Sida loo Isticmaalo App Remote App
Isticmaal iPod-yada Multiple ee Kombuyuutar: Maareynta Maareynta
Sida Loo Beddelo Loogu Dhawaaqo iTunes Songs in MP3 5 Tallaabooyinka Nasiibka ah
Sida Loo Abuuro Xisaab Lacageed Lacageed Lacag la'aan
Qaadashada Sawirada Weyn ee Shabakadaha
Ku darista Qolalka Shirkadda Facebook Bogga RumbleTalk
Ku qor HTML: Fikradaha HTML ee aasaasiga ah
EBay 101: Hordhac u ah aasaaska eBay
JVC Intros 4th Gen-e-Shift 4K Mashruucyada CEDIA 2015
Samee Jawaab Ka bixitaanka Ka-baxsan Xafiiska Gmail
Dhamaan ku saabsan Google Cardboard 3D VR Headset for Android
Dib u eegista Windows Live Photo Gallery
Sida loo Xoojiyo Gurmadka iyo Amarrada AMBER ee iPhone
9ka Ciyaartood ee ugu Fiican ee PlayStation 4 Exclusives si aad u iibsato 2018
8 Qarsoodi ah oo qarsoodi ah oo iPad kuugu soo rogi doona Pro
Diyaarinta Akhriska ama Scrabble Online
Maxay tahay 'WRT'? Waa maxay WRT?
"MX iyo ATV Qasab" Khiyaamada PlayStation 2
Qodobada 8aad ee Sharciga Kartida ee Isticmaalida Macluumaadka Shaqada
Ku samee Websayada Waaweyn ee Waaweyn ee Adobe Illustrator Macalinkan